के हो डिजिटल रेप ? | प्रतीक दैनिक - Prateek Daily
Home गृहपृष्ठ के हो डिजिटल रेप ?
दिल्लीस्थित नोएडामा एउटा डिजिटल रेपको घटना प्रकाशमा आएको छ । नोएडाको थाना सेक्टर–३९ मा ८१ वर्षीय बुजुर्गले सात वर्षदेखि नाबालिग केटीसँग डिजिटल रेप गरिरहेका थिए । ती केटीको १० वर्षको उमेरदेखि १७ वर्षको उमेरसम्म वृद्धले डिजिटल रेप गरेको आरोप लगाइएको छ ।
पीडित किशोरीले प्रहरीलाई अडियो–भिडियो उपलब्ध गराएपछि प्रहरी सक्रिय भएको थियो र प्रहरीले आरोपी बुजुर्गलाई पक्राउ गरेको छ । सेक्टर ४६ मा बस्ने आरोपी मूलरूपले इलाहाबादमा बस्छन् । आरोपी पहिले हिन्दू थिए र पछि क्रिश्चियन धर्म अँगालेर आफ्नो नाम मेरिस राइडर राखेका छन् । डिजिटल रेपबारे प्रकाशमा आएपछि मान्छेहरू यसबारे जान उत्सुक भएका छन् । नोएडाको सेक्टर–३९ क्षेत्रमा बस्ने बुजुर्ग चित्रकार हुन् र उनले नाबालिग नोकर्नीसँग डिजिटल रेप गरिरहेका थिए । किशोरीको उजूरीपछि प्रहरीले वृद्धलाई पक्राउ गरी मुद्दा दर्ता गरी जेल पठाएको छ ।
के हो डिजिटल रेपः डिजिटल रेपमा मोबाइल वा अन्य विद्युतीय उपकरणसँग कुनै सम्बन्ध छैन । डिजिटल रेपको मतलब यो होइन कि कुनै केटा वा केटीको शोषण इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिन्छ । यो दुई शब्द– डिजिटल र रेपबाट बनेको हो । अङ्ग्रेजीमा डिजिटको अर्थ अङ्क हुन्छ भने अङ्ग्रेजी शब्दकोश अनुसार औंला, बूढी औंला, खुट्टाको औंलालाई पनि भनिन्छ । अर्थात् बलात्कारको त्यो स्थिति जसमा औंला, खुट्टाको बूढी औंलाको प्रयोग किशोरीको कोमल अङ्गमाथि गरिन्छ, यसैलाई डिजिटल रेप भनिन्छ ।
Previous articleचीनले बनायो एयरशीप
Next articleश्रीलङ्कामा भीषण बाढी, ६०० भन्दा बढी परिवार प्रभावित